Reiser5 faira system mukusimudzira inosanganisa rutsigiro rwekuyera kuyera | Linux Vakapindwa muropa
Edward shishkin mugadziri uyo anga achitarisira kuchengetedza Reiser4 faira sisitimu rutsigiro kwemakore gumi apfuura yeshanduro nyowani dzekernel. Kunyangwe iyo system ichichengetedzwa, zvakasiyana nemamwe mafaera masisitimu akaenderera mberi mukuvandudza kwavo. Edward Shishkin akashanda mukuchengetedza Reiser4 uye panguva imwechete ini ndinoshanda mukuvandudza kweiyo Reiser5 fileystem izvo zvatove inowanikwa kuyedzwa.
Iyi vhezheni itsva ye Reiser5 inomiririra kusanganisa hutsva muyakaenzana kuyera, inoitwa kwete padanho rekuvharira, asi kuburikidza nesystem faira.
Sechinobatsira yenzira iyi, asiri-akafanana FS + RAID / LVM uye FS mapakeji anonzi haana rusununguko rwezvinhu zvinokanganisa (ZFS, Btrfs), senge dambudziko remahara nzvimbo, kunyura kwekuita kana uchizadza vhoriyamu pamusoro pe70%, yechinyakare zvine musoro vhoriyamu dhizaini algorithms (RAID / LVM), haibvumire iwe kugovera zvakaringana dhata pane vhoriyamu zvine musoro.
Mune yakafanana FS, usati wawedzera chishandiso kune vhoriyamu ine musoro, inofanirwa kuve yakarongedzwa neyakajairwa mkfs yekushandisa.
Kusiyana neZFS, Reiser5 haigadzikise yega block block, kunyangwe ichishandisa yemahara block allocator O (1). Izvo zvinokwanisika kunyora nenzira yakapusa uye inoshandae zvine musoro vhoriyamu kubva kuvharira michina yemasayizi akasiyana uye bandwidths. Iyo data inoparadzirwa pakati pemidziyo iyi vachishandisa algorithms nyowani.
Mukuzivisa kweiyi muyedzo vhezheni Edward Shishkin akati:
Ndiri kufara kuzivisa nzira nyowani yekuwedzera ekuvharira zvishandiso kune zvine musoro mavhoriyamu pamushini wepanzvimbo.
Ini ndinofunga iri danho nyowani nyowani mufaira system (uye inoshanda sisitimu) kuvandudza: mavhoriyamu emuno ane yakafanana kuyera ...
Mune maitiro edu, kuyera kuyera kunoitwa nefaira system zvinoreva, pane block block zvinoreva. Mushandisi anodzora kuyerera kwezvikumbiro zveI / O zvakapihwa mudziyo wega wega ...
Sekutaura kwaEdward Shishkin: chikamu cheI / O zvikumbiro zvinotungamirwa kune yega yega kifaa chakaenzana neyakaenzana mushandisi-yakapihwa kugona, kuitira kuti vhoriyamu ine musoro izadzwe ne data "zvakaenzana" uye "zvakanaka".
Panguva imwecheteyo, epasi-chinzvimbo blockchaini michina inogamuchira mashoma mabhuroko ekuchengetera, uye mashoma-anoita madhizaini haazove bhodhoro (sezvazviri, semuenzaniso, mune RAID arrays).
Kuwedzera chishandiso kune vhoriyamu uye kubvisa chishandiso kubva muvhoriyamu kunoenderana nekuenzanisazve iyo inochengetedza "kurongeka" kwekugovera.
Zvese zvinosanganisirwa block zvigadzirwa zvinogona kuchengetedzwa panguva imwe chete pane vhoriyamu inonzwisisika uchishandisa nzira yemumwe neumwe wavo (kudzikiswa kwemadhiraivha akaoma, kutumira kurasa mibvunzo yeSSD, nezvimwewo).
Nzvimbo yemahara pane vhoriyamu ine musoro inodzorwa neyakajairwa df (1) zvinoshandiswa. Uye zvakare, mushandisi ane mukana wekutarisa iyo yemahara nzvimbo pane yega yega chinhu cheiyo zvine musoro vhoriyamu mudziyo.
Kufambira Mberi Kwakakosha Mukukwirisa Kwekuyera Kugadzirwa Uchishandisa Parallel Network Faira (GPFS, Luster, nezvimwewo). Nekudaro, zvaive zvisina kujeka, maitiro ekushandisa
ako matekinoroji kune epano FS.
Kunyanya, imhaka yekuti mune yemuno faira masystem haana hunyanzvi hwakawanda se "back-end storage" senetiweki vanoita. Izvo izvo zvemuno FS zvine zvakashata zvakanyanya interface ye kudyidzana neiyo block dura. Semuenzaniso, pane yemuno Linux FS unogona ingo nyora uye ubudise I / O chikumbiro kupokana nechimwe buffer.
Pakati pezvinhu izvo zvichiri mune Reiser5's TODO runyorwa ndivo:
FSCK kusimudzira kutsigira zvine musoro mavhoriyamu
Asymmetric LV ine inopfuura imwechete blockadetata nevhoriyamu
zvakaenzana zvine musoro mavhoriyamu
3D mifananidzo yeLV
Kugovera metadata kune akawanda subvolume
Tarisa / dzorera zvine musoro mavhoriyamu uchishandisa fsck utility (kusimudzira kubva yapfuura vhezheni)
Mavhoriyamu epasi rose (maratidziro), achiwedzera michina pamashini akasiyana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Reiser5 faira system mukusimudzira inosanganisa rutsigiro rwekuyera kwakaenzana
Wow, ndakafunga kuti reiserfs yakanga yafa mushure meHans ..